TRF ee Warbaahinta | Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn TRF ee Warbaahinta
Hay'adda Reward Foundation ayaa marar badan ka soo muuqatay warbaahinta. Waa kuwan sheekooyinka qaarkood oo muujiyey shaqadeenna.
Haddii aad rabto inaad ku soo bandhigto Aasaaska Abaalmarinta barnaamijkaaga warbaahinta, fadlan kala xiriir Xafiiskayaga Saxaafadda ee info@rewardfoundation.org. Waxaanu taageernaa saxaafad tayo leh. Dhammaan waraysiyadayada waxaa lagu dhisay cilmi-baariskii ugu dambeeyay ee saameynta isticmaalka fara-xumeynta ee shakhsiga iyo bulshada. Waxaan kaa caawin karnaa sidii loo horumarin lahaa sheekadaada. Sidoo kale waxaan khibrad u leenahay qorista ra'yiga wargeysyada qaranka iyo joornaalada.
Mary Sharpe waxay khibrad caalami ah u leedahay sarkaal saxaafadeed. Waxay dhowr sano ka shaqeysay Guddiga Yurub ee Wakiilka Yurub ee Cilmi-baarista, Hal-abuurka iyo Sayniska. Faallooyinka iyo xigashooyinka warbaahinta waxaa lagu heli karaa ogeysiis gaaban.
Waxaan ku soo bandhignay sheeko-bogga hore ah ee Sunday Times Scottish Edition. Tan waxaa ka soo qaatay hay'ado ka badan in ka badan dalal. Waxaan sidoo kale ku soo bandhignay waxyaabo ka kooban The Guardian, The Telegraph iyo qaar badan oo ka mid ah Boqortooyada Midowday iyo tabloids-ka Scottish-ka.
Our Quudinta YouTube wuxuu daboolayaa mowduucyada xiisaha leh oo ay ku jiraan Autism Spectrum Disorder iyo mustaqbalka cilmi baarista sayniska ee isticmaalka qaawan ee dhibaatada leh.